सार्वजनिक भयो डीपिएलको खेल तालिका, हेर्नुस् कसको भिडन्त कोसँग ? - Everest Dainik - News from Nepal
सार्वजनिक भयो डीपिएलको खेल तालिका, हेर्नुस् कसको भिडन्त कोसँग ?
काठमाडौं, माघ १९ । धनगढीमा यही माघ २६ देखि शुरु हुने धनगढी प्रिमियर लिग (डीपिएल) को खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक तालिका अनुसार उद्घाटन खेलमा घरेलु टोली धनगढी स्टार्स र विराटनगर किंग्स खेल्ने छन् । यस्तो छ आयोजक डीपीएलले सार्वजनिक गरेको खेल तालिका–
याे पनि पढ्नुस डीपीएलको खेल तालिका सार्वजनिक, उद्घाटन खेलमा धनगढी र काठमाडौं भिड्ने